Cimiladu waxay sharraxaysaa dhinacyada kala duwan ee udhexeeya Webka Design iyo SEO
Naqshadda Webka iyo SEO waxay leeyihiin wax badan oo la wadaago laakiin waxay ka dhigan yihiin kuwo aad u kala duwanwaxyaabo. Maaddaama dadku sii wadaan abuurista bogag intaa ka badan iyo kuwo kale, mid ayaa laga yaabaa in la yiraahdo waa maxay waxyaabaha muhiimka ah ee la raacayo Tusaale ahaan, bloggerwaxay isku dayi karaan inay abuuraan jawi jawi, saaxiibtinimo, sahlan oo loo adeegsan karo oo leh waxyaabo tayo sare leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay weli u baahan doontaa qadar ku filanee farsamooyinka SEO si loo codsado si loo gaaro bartilmaameed la doonayo.
Maamulaha Guusha Macaamilka Sare Adeegyada Digital, Max Bell wuxuu tilmaamayaa waxa keena xiriirka u dhexeeya Web Design iyo SEO.
Isku xirnaanta udhexeeya Webka iyo SEO
SEO wuxuu inta badan ka hadlayaa xulashada ereyada 'keywords'. Hadafkiisa koowaad waa inuu hubiyoereyada muhiimka ah ee loo isticmaalo bogga bogga iyo sidoo kale cinwaanada oo dhan. Ereyada muhiimka ah waa in ay la barbar dhigaan ereyada muhiimka ah ee ra'yigaagalaga soo doortay kala duwanaanta dadka ay raadinayaan si ay u helaan boggaaga. Intaas waxaa dheer, dhammaan sawirada ku yaala goobtaadaha "Alt tags" ayaa lagu sharxay si ay u oggolaadaan dhamaan daawadayaasha inay arkaan meesha sawirku ka tirsan yahay. SEO wuxuu ku lugleeyahay "Isticmaalka ereyada" oo ka kooban ereyo muhiim ah,halkii ay ka ahayd codadka kala duwan / waraaqo. Sidaa awgeed, SEO waa wakiilkaaga iibka ah ee dadka keenaya albaabka dukaankaaga. Sidaa darteed, SEO waa kanKanaalka oo ganacsatada internetka isticmaala si kor loogu qaado taraafikada bogag gaar ah
Marka SEO keeno martida si aad goobta, naqshadda webka, on kalegacanta, waa qalab u baahan inuu soo booqdo iibsadaha..Iyada oo aan loo eegin waxa boggagaaga uu kobcinayo, naqshadeynta webku waxay u muuqan doontaa wicitaanka talaabadawaxyaabaha ku qoran jagooyinka kala duwan ee bogagga internetka. Naqshadda Webka waxay ku lug leedahay dhinaca farsamada ee abuuritaanka khibrada user ee website-kaaga.Qaab-dhismeedka, muuqaalka muuqaalka, qaab-dhismeedka iyo habka uu qofku ku hawlan yahay waa naqshadaha muhiimka ah ee naqshadda shabakadu waa inay daboolaan. Goobaha wanaagsan waxay leeyihiin fududgaari oo si dhaqso ah uga jawaabi doona naqshadeynta bogga internetka ee tartanka. UI waa in uu si buuxda u daboolaa, oo wax ka qabta dhammaan dadkaqalabyada laga yaabo in ay isticmaalaan nidaamyada kala duwan ee hawlgalka
Iskuduwaha u dhaxeeya Naqshadda Webka iyo SEO
Naqshadeynta shabakadda waxay diiradda saartaa dhinacyada farsamada ee abuuristaadawebsite-ka iyo waxyaalaha la tixgeliyay si loo helo khibrad booqasho wanaagsan. Dhinaca kale, RaadiOptimization Engine (SEO) waa waxa kor u qaada muuqaalka website-kaaga makiinadaha raadinta sida Google, Bing iyo Yahoo. Gaar ahaanereyada raadinta waxay gaari doonaan jagooyin sare oo gaar ah oo siin doona boggaaga qadarka ku filan ee gaadiidka.
Xaaladaha qaarkood, ujeedooyinka SEO-ga iyo naqshadeynta webku way kala duwanaan karaan. WixiiTusaale ahaan, naqshadda shabakadu waxay jecel tahay isticmaalka sawirro badan si loo sharaxo waxyaabaha la soo bandhigay ee bogga intarnetka. Dhanka kale, SEO wuxuu diiradda saaraaisticmaalka erayada. Xaqiiqdii, isticmaalka sawiradu wuxuu yareeyaa baahida loo qabo in la isticmaalo waxyaabaha qoraalka ah oo ku siin kara faa'iido tartan ahdarajo sare. Naqshadda shabakada ee wax ku oolka ah waxay xooga saaraysaa isticmaalka erayada gaarka ah ee kor u qaada muuqaalka muuqaalka guud.Marka la barbar dhigo, SEO waxay muujineysaa ereyada muhiimka ah ee ugu macquulsan ee ku jira jagooyin badan oo ku jira bogga internetka
Labadaba SEO iyo Webka naqshadeynta ayaa muhiim u ah helitaanka shabakaddayoolalka muddada dheer. Maadaama SEO kordhiyo aragti ah boggaaga iyo content, naqshadda boggaaga waa inay beddelaan booqdayaashanmacaamiisha. Natiijada, labaduba waa muhiim waxayna u baahan karaan inay si wadajir ah uga shaqeeyaan hal ama dhowr arrimood si ay u keenaan website wanaagsan Source .